Diagenesis: njirimara, usoro na nhazi | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 23/11/2021 10:17 | Geology
Na geology enwere ọtụtụ ụdị usoro na-eme na nkume na gburugburu ebe obibi. Otu n'ime ha bụ digenesis. Ndị a bụ usoro niile nke sediments na-eme n'ime oge nke na-amalite site na ntinye ego mgbe ntụgharị nkume gasịrị. N'okwu ndị a, anyị na-ekwu maka nhazi nkume sedimentary na nkume metamorphic.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere digenesis, àgwà ya na curiosities.
1 Gịnị bụ digenesis
2 Usoro diagenetic
3 Diagenesis na cimentation
Gịnị bụ digenesis
Diagenesis bụ okwu ejiri mee ihe n'ụzọ abụọ: nke mbụ na-ezo aka n'usoro ịhazigharị akụkụ nke ihe n'ime ihe ọhụrụ ma ọ bụ dị iche. Nke abụọ, na nke a na-ejikarị eme ihe, na-ezo aka na usoro niile nke sediments na-agafe ma ọ bụ na-agafe n'oge a na-amalite idobe ha ma na-aga n'ihu ruo mgbe ha ghọrọ nkume. Ọ na-ezokwa aka na usoro kemịkalụ na nke anụ ahụ ndị ọzọ nwere ike ịgbanwe nkume ndị a ruo mgbe ha dara. Na geology, metamorphism bụ mgbanwe nke nkume site na usoro ala nke gụnyere oke okpomọkụ na nrụgide.
Ndị ọkà mmụta banyere mbara ala na-ekewa nkume n'ime ụzọ atọ dabere na gburugburu ebe e guzobere ha. A na-etolite nkume sedimentary site n'ịgbanwe akwa sedimentary ka ọ bụrụ nkume; usoro nke na-achọ oge dị ukwuu na nrụgide. A na-etolite nkume ndị na-asọ oyi site na oyi nke lava ma ọ bụ magma. Magma na lava bụ okwu abụọ maka otu ihe, ma magma na-ezo aka na lava nke dị n'okpuru elu ụwa, lava na-ezo aka na lava nke dị ugbu a n'okpuru elu. Nkume Metamorphic bụ nkume na-egbuke egbuke ma ọ bụ nkume sedimentary nke na-agbanwe n'okpuru oke nrụgide, ike angular, ma ọ bụ okpomọkụ, ma anaghị agbazecha nkume ahụ kpamkpam wee banye ya n'ime oyi akwa magma.
Usoro niile nke kemịkalụ na anụ ahụ nke sediments na-eme mgbe ha na-agbanwe ghọọ nkume, yana usoro usoro na-emetụta àgwà nkume, n'okpuru okwu digenesis. Usoro ndị a bụ isi usoro kemịkalụ na okike, mana ha na-agụnye usoro anụ ahụ, dị ka delamination. Ka o sina dị, digenesis adịghị agụnye ihu igwe, nke bụ nke ụdị usoro ala ọzọ.
Usoro nke digenesis nwere ike ịdị mgbagwoju anya na nke ukwuu iji depụta ya n'isiokwu nke nha a, mana ha dabara n'ụdị dị iche iche. Otu n'ime ụdị kachasị mkpa nke usoro diagenetic bụ ntụgharị nke biomass na sedimenti na hydrocarbons, nke bụ mmalite mmalite nke mmanụ crude na mmanụ ọkụ ndị ọzọ. Fossilization bụ usoro digenesis nke na-eme n'ọkwa molekụla. Mgbe mkpụrụ ndụ nke anụ ahụ, karịsịa ụfọdụ ogige dị n'ime ọkpụkpụ, jiri calcite na mineral ndị ọzọ dochie anya, calcite na mineral ndị ọzọ na-agbaze na mmiri na mmiri. Ndokwa site na nzacha site na oyi akwa nke sedimenti.
Diagenesis na cimentation
Cementation bụ ọkwa dị mkpa nke digenesis. nke na-eme ka akụkụ sedimenti n'otu n'otu na-ejikọta na ibe ha. Nke a bụ usoro kemịkal nke mineral gbazere (dị ka calcite ma ọ bụ silica) na-esi na mmiri pụta ka ha na-abanye na sedimenti. Nrụgide nke akwa akwa nke sedimenti na-ekpuchi elu na-eduga na usoro nke digenesis anụ ahụ nke a na-akpọ compaction. Mkpokọta a, yana nzacha nke mmiri bara ụba nke ịnweta, na-eme ka ihe ndị dị na sedimenti na-arapara na mineral ndị gbazere. Ka sedimenti na-akpọnwụ, mineral na-esi ike ma na-etolite ciment eke. Nkume ájá bụ ụdị nkume a na-emekarị n'ụzọ dị otú a. Ọtụtụ usoro dị mgbagwoju anya nke digenesis nwekwara ike ime, gụnyere mgbanwe na nhazi nke sedimentary n'ígwé site na mpụta mmiri na-ebu mineral gbazere.
Site na usoro a, enwere ike ịmepụta mineral ọhụrụ na mgbe ụfọdụ ụfọdụ mineral ma ọ bụ ogige ga-esi na sedimenti pụta ma jiri mineral ma ọ bụ ogige ndị ọzọ dochie ya. Petrification na-eme n'oge digenesis na bụ usoro nke sediments na-atụgharị ghọọ nkume. Otú ọ dị, mgbe petrification, digenesis nwere ike ịga n'ihu.
Ọtụtụ usoro diagenetic na-ewe puku kwuru puku ma ọ bụ nde afọ. Ndị ọkà mmụta banyere mbara ala, ndị ọkà mmụta ihe ochie, ndị ọkà mmụta ihe banyere mmadụ, na ndị ọkà mmụta ihe ochie na-enyocha okwute iji chọpụta usoro nrịanrịa nke kpụrụ ha. N'ụzọ dị otú a, ha mụtara ọtụtụ ihe banyere oge gara aga, gụnyere ozi gbasara mmegharị tectonic nke jikọrọ ọnụ, data gburugburu ebe obibi, na ozi ndị ọzọ gbasara nhazi nkume na akụkọ ihe mere eme nke ụwa.
Diagenesis na-agụnye lithification, usoro nke ịgbanwe sedimenti rụrụ arụ na nkume siri ike sedimentary. Usoro lithification bụ isi na-agụnye compaction na cimentation. Mgbanwe diagenetic a na-ahụkarị nke anụ ahụ bụ nchikota. Ka nkwụnye ego na-ewuli elu, ịdị arọ nke ihe a na-ejikọta ya ga-ejikọta ihe nkwụnye ego dị omimi. A na-eli sedimenti miri emi, otú ahụ ka ọ ga-esikwu ike ma sie ike.
Ka ụmụ irighiri ihe na-abawanye ụba, oghere pore (oghere oghere n'etiti ihe ndị ahụ) na-ebelata nke ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, mgbe a na-eli ụrọ n'ihe dị iche iche kilomita n'okpuru ebe a, enwere ike ibelata ụda ụrọ ruo 40%. Ka oghere pore na-agbakọ, ọtụtụ n'ime mmiri a na-etinye na sedimenti na-apụ.
Simenti bụ usoro kachasị mkpa maka mgbanwe nke sedimenti n'ime nkume nkume sedimentary. Ọ bụ mgbanwe diagenetic nke ahụ na-agụnye crystallization nke mineral n'etiti onye sediment irighiri. Mmiri dị n'ime ala na-ebu ion na ngwọta. Nke nta nke nta, ion ndị a na-eme ka mineral ọhụrụ dị na oghere oghere, si otú a na-eme ka ihe mkpofu sie ike.
Dị nnọọ ka ọnụ ọgụgụ nke oghere pore na-ebelata n'oge nchịkọta, ịgbakwunye ciment na sedimenti ga-ebelatakwa porosity ya. Calcite, silica, na iron oxide bụ simenti a na-ahụkarị. Ịchọpụta ihe nrapado na-abụkarị okwu kwụ ọtọ. Calcite simenti foams n'ihi itughari hydrochloric acid. Silica bụ ciment kacha sie ike, ya mere ọ na-emepụta nkume sedimentary siri ike.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere digenesis na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Diagenesis
Mpi nke africa